Amaphoyisa omgwaqo kamasipala aphucwe izibhamu | News24
Amaphoyisa omgwaqo kamasipala aphucwe izibhamu
AMAPHOYISA omgwaqo angaphansi kukaMasipala uMsunduzi athi asabela izimpilo zawo kulandela ukuphucwa kwawo izibhamu zomsebenzi.
Lokhu kulandela ngemuva kokuba ithimba lamaphoyisa elilwa nobugebengu elajutshwa uNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu Bheki Cele ligasele emahhovisi amaphoyisa omgwaqo akuWashington Road nokuyilapho kube sekuthathwa khona izibhamu zawo wonke amaphoyisa asebenza ngaphansi kukamasipala.
Ngokuthola kwe-Echo ngomthombo wayo othembekile ngaphakathi, ukuthathwa kwalezi zibhamu kungemuva kokuba kutholakale ukuthi umasipala awuyilandeli imigomo efanele yokusetshenziswa kwazo.
“Kuthathwe izibhambu ezingaphezu kwama-200. Izibhamu zizophinde zihanjiswe ukuba ziyohlolwa ukuthi abukho yini ubugebengu ezake zabandakanyeka kubona,” kubeka umthombo.
Ngesikhathi i-Echo ihambele kulama hhovisi ngoLwesine, amaphoyisa omgwaqo kamasipala uMsunduzi abelokhu engena ephuma elethe izibhamu ngemuva kokuyalelwa ukuthi kumele azibuyise wonke.
Elinye lamaphoyisa elikhulume ne-Echo kodwa langathanda ukuba kudalulwe igama lalo lithe nakuba bazi ukuthi amaphoyisa enza umsebenzi wabo kodwa bona bazizwa sengathi impilo yabo ibekwe engcupheni.
“Siyasebenza phela ngoba ayikho into esizoyenza kodwa nje asiphephile. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asazi nokuthi ziyoze zibuyele nini kuthina. Emgwaqeni sihlangana nabantu abaningi abahlukene angazi uma ngabe sesithathelwa amathuluzi ethu okusebenza kuthiwa asenze njani. Kulandwe ngisho abantu akade bengasebenzi ngesonto eledlule kwathiwa kumele balethe izibhamu ngoba ziyafuneka” kuchaza yena.
Omunye wabasebenzi uveze ukuthi baphinde babizelwa emhlanganweni ngumasipala nalapho owafika wabatshela khona ukuthi ukuthathwa kwezibhamu zabo ingoba kunokhiye owodwa walapho zigcinwa khona.
I-Echo iphinde yathola ukuthi akusizona izibhamu zamaphoyisa omgwaqo kuphela ezithathiwe kodwa kuphinde kwathathwa nezabonogada bakuwona lo masipala.
Imizamo yokuthola umasipala ukuba uphawule ngokuthi ngabe ku-yiqiniso yini ukuthi izibhamu zithathwe ngoba bengayilandeli imigomo, ayiphumelelanga.
Ibamba lokhulumela wona lomasipala uNkk Ntobeko Ngcobo ukhiphe isitatimende ebesichaza ukuthi ukuthathwa kwezibhamu kungenye ye-zindlela yokuhlolwa kwangaphakathi (audit). Esitatimendeni uqhube wathi amaphoyisa lokhu akwenze njengengxenye yohlelo lwawo ngokwemigomo ye-Firearms Control Act ekumele umasipala ubavumele uma ngabe sebenza umsebenzi wabo. “Umasipala nawo uyaba nako ukuhlolwa kwawo kwangaphakathi njalo ngenyanga. Singumasipala sizobe sesaziswa ngemiphumela ebe khona mayelana nokulandelwa kwemigomo,” kufundeka isitatimende.